Ny peratra fifamofoana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy.
Latsaky ny 1 CT
1 hatramin'ny 2.99 CT
3 hatramin'ny 4.99 CT
5 hatramin'ny 6.99 CT
7 hatramin'ny 9.99 CT
10 hatramin'ny 14.99 CT
15 hatramin'ny 19.99 CT
20 hatramin'ny 49.99 CT
Maherin'ny 50 CT
Vato nahaterahana volana janoary
Vatosoa faran'ny volana febroary
Vato nahaterahana volana martsa
Vato nahaterahana volana aprily
Vato nahaterahana Jona
Vato nahaterahana Jolay
Vato nahaterahana aogositra
Vato nahaterahana septambra
Vato nahaterahana Oktobra
Vato nahaterahana Novambra
Vato nahaterahana Desambra
SERVICE FIKAMBANANA GEMOLOGY ONLINE
Ny fombafomba ho an'ny fanoloran-tena dia miovaova arakaraka ny fotoana, ny toerana ary ny kolontsaina. Ny peratra amin'ny fanaovana firaisana dia tsy fahita firy, ary rehefa nomena ny fanomezana toy izany, dia nisaraka tamin'ny peratra mariazy izany.
Taratasy ho an'ny vehivavy
Vehivavy, mihainoa. Nanonofy momba ny andro manokana ianao hatramin'ny naha tanora anao. Mieritreritra ny akanjonao, ny lanonana, ny dihy voalohany; ny tsipiriany rehetra. Saingy, moa ve ianao nijanona tsy nieritreritra momba ny habetsaky ny karazana fanoloran-tena ho an'ny vehivavy misy?
Ny andro lavorary, mazava ho azy, ny tena zava-dehibe indrindra. Na izany aza, ny peratra dia zavatra hosotroinao isan'andro mandritra ny androm-piainanao ary mendrika ny ho tonga lafatra.
Taratasy ho an'ny lehilahy
Raha misy vehivavy afaka manao vondrona angon-drakitra hanambara ny toerana misy azy, nahoana no tsy mety ny lehilahy? Eny, tsy misy mihitsy ny antony. Satria maro kokoa ny mpivady te-hizara ny porofo momba ny toerana misy azy ary ny fiarahamonina dia manaiky mora kokoa ny fifandraisana tsy mifanaraka.
Rosia volamena, volamena fotsy, volamena mavo, platinum na palladium?
Ireo mpihaza amin'izao fotoana izao dia afaka manana fomba isan-karazany amin'ny metaly samihafa amin'ny loko samihafa. Na dia lasa malaza kokoa aza ny safidy toy ny platinum sy palladium, dia safidy tsara foana ny volamena. Ny fianarana momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny volamena mavokely vs rose amin'ny vondrona volamena vava volamena dia fomba lehibe hanaparitahana ny safidinao rehefa manapa-kevitra hoe inona metal no safidy ho an'ny firavaka izay maneho ny fitiavana eo amin'ny fiainanao.
Fanamboarana saribakoly azo vidiana
Aza hadinoina ny vidiny. Maro ny safidy azo raisina ho an'ny angon-drakitra tsy azo avela. Mazava ho azy, ny dikan'ny hoe "sarobidy" dia tena mamitaka. Saingy raha tsy mitovy ny teti-bola dia manana ny iray ny tsirairay.
Ny solitaire, oval, emerald, boronda na diamondra renivohitra, dia tsy misy fetra ny firafitry ny karazana, ny endrika ary ny endriny.
Ny tsirairay amin'ireo C efatra (Carat Weight, Cut, Colour, Clarity) dia miaraka amina tabilao diamondra maneho ny fahasamihafana misy eo amin'ny naoty. Rehefa avy mianatra bebe kokoa, raha mila mahita diamondra manokana ianao dia tsidiho ny fivarotana firavaka eo an-toerana. Mahazoa fahatsapana tsara kokoa momba izay sarobidy aminao amin'ny diamondra.
Ny peratra amin'ny famolavolan'ny Gemstone dia safidy tonga lafatra ho an'io endrika miavaka sy tsy mahazatra io miaraka amin'ny loko sy ny loko. Mitovitovy amin'ny ravaka vita tamin'ny vintage maro, ny peratra vita amin'ny vatosoa dia vita amin'ny vatosoa vita amin'ny vatosoa, avy amin'ny emeralda sy rubi ho safira, morganita, opals ... Toa noforonina miaraka amin'ny jiro ho vato santionana izay voahodidin'ireo diamondra madinika na vato tsy misy loko.
Nandritra ny taona maro dia maro ireo mpanatontosa fanjaitra maro, toa an-dry Tiffany, Cartier sy Harry Winston, izay lasa marika amin'ny lozisialy sy ny fandanindaniam-poana. Ny fanaovana diamondra tsy fahita firy sy tsy manam-paharoa ary ny fifaneraserana amin'ny mpanjifa manankarena sy malaza dia matetika manome mpanamboatra kavina be voninahitra sy tombontsoa manokana. Fantatra amin'ny ankapobeny any amin'ny firavaka izany fa matetika dia lafo kokoa ny mpamorona sy ny marika famantarana ny marika.
Ny mpanamboatra antsika dia afaka mamorona fanao manokana ho anao manokana. Amin'ny safidy maro, azonao antoka fa hahita ny peratra lavorary ho an'ny fotoana tonga lafatra ianao.
USD: Dolara amerikana (amerikana) ($)
AED: dirham Emira Arabo Mitambatra (د.إ)
AFN: Afghani Afghana (؋)
REHETRA: Albaney lek (L)
AMD: tantara an-tsehatra Armeniana (AMD)
AOA: Angole kwanza (Kz)
ARS: Peso Arzantina ($)
AUD: Dolara Aostraliana ($)
AWG: Aror florin (Afl.)
BAM: marika miovaova (KM) i Bosnia sy Herzegovina
BBD: Dolara Barbadiana ($)
BGN: Lev Bulgarian (лв.)
BIF: Franc burundiana (Fr)
BMD: dolara Bermudianina ($)
BND: Dolara Brunei ($)
BOB: Boliviano Boliviana (Bs.)
BRL: tena Breziliana (R $)
BSD: Dolar Bahamianina ($)
BWP: Botsoana pula (P)
BYN: belarosiana ruble (Br)
BZD: Dolara Belize ($)
CAD: dolara kanadiana (C $)
CDF: Kongoley franc (Fr)
CHF: Franc franc (CHF)
CLP: Peso Shiliana ($)
CNY: yuan sinoa (¥)
COP: Peso Kolombiana ($)
CUC: Peso azo ovaina Cuba ($)
CUP: Peso kiobà ($)
DOP: Peso Dominikana (RD $)
DZD: Dinarà Alzeriana (د.ج)
EGP: Ejipsianina (EGP)
ETB: Birrianina etiopianina (Br)
FJD: Dolara Fijiana ($)
FKP: Nosy Falkland pounds (£)
GEL: Zeorziana lari (₾)
GGP: kilao Guernsey (£)
GIP: Gibraltar pounds (£)
GNF: franc gineana (fr)
GTQ: Goatemalt quetzal (Q)
GYD: dolara gyane ($)
HKD: Dolara Hong Kong ($)
HUF: foron hongariana (Ft)
ILS: sekely vaovao israeliana (₪)
IMP: Manx pounds (£)
INR: Rupee Indiana (utu)
ISK: krôna Islandy (kr.)
JEP: kilao Jersey (£)
JMD: Dolar Jamaikana ($)
JOD: Dinarianina Jordana (د.ا)
JPY: yen japoney (¥)
KHR: riel kambodziana (៛)
KMF: Franc comorian (Fr)
KPW: Nandresy ny Korea Avaratra (₩)
KRW: Nandresy ny Koreana Tatsimo (₩)
KWD: Koety Dinar (د.ك)
KYD: Dolara Cayman Islands ($)
LBP: Libaney kilao (ل.ل)
LKR: Rupee Sri Lankey (රු)
LRD: Dolara liberiana ($)
MAD: dirham maraokana (د.م.)
MKD: denar Makedoniana (ден)
MNT: Mongolianina tögrög (₮)
MOP: Macapianina pataca (P)
MUR: Rupee maorisiana (₨)
MXN: Peso Meksikana ($)
MYR: Ringgit Maleziana (RM)
MZN: metaly mozambika (MT)
NAD: dolara Namibiana (N $)
NGN: Nizeriana naira (₦)
NIO: Nicaragoa córdoba (C $)
NOK: krone norveziana (kr)
NZD: Dolara New Zealand ($)
PAB: Balboa Panameana (B /.)
PGK: Papua New Guinea Guinea (K)
PKR: Rupee Pakistaney (₨)
PLN: złoty poloney (zł)
PYG: guaroí Paraguayan (₲)
Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny romainina
RSD: Dinarà serba (рсд)
RUB: robla rosiana (₽)
SAR: Saodiana riyal (ر.س)
SBD: Dolara Nosy Solomon ($)
SDG: Sudaney kilao (ج.س.)
SEK: krona soedoà (kr)
SGD: Dolara Singaporo ($)
SHP: Saint Helena pounds (£)
SOS: shail Somali (Sh)
SRD: Dolara Suriname ($)
SYP: pounds Syriana (ل.س)
SZL: Soazilandy lilangeni (L)
TMT: Turkménistanistan (m)
TND: Dinarisy Tonizia (د.ت)
TOP: Tonga masom-bolo (T $)
ANDRAMO: Lira tiorka (₺)
TTD: Dolara Trinidad sy Tobago ($)
TWD: Dolara Taiwan vaovao (NT $)
TZS: shiliana Tanzaniana (Sh)
UAH: Hryvnia Okrainiana (₴)
UGX: Famoronana Ogande (UGX)
VEF: bolistana Venezoeliana (Bs F)
VND: Vietnamianina đồng (₫)
WST: Taora Samoa (T)
XAF: CFA franc afrikanina afovoany (CFA)
XCD: Dolara Karaiba Atsinanana ($)
XPF: CFP fr (Fr)
YER: Yemenita rial (﷼)
ZAR: Randy Afrika Atsimo (R)
Te hahazo fanavaozana momba ny vokatra sy ny fampiroboroboana aho.